Iindaba - 5 Izinto eziphambili ezichaphazela umgangatho wokumakisha kumatshini wokumakisha we-laser
Ukusebenza komatshini wokumakisha we-laser kuya kuncipha kancinci emva kokuba kusetyenziswe ixesha elide. Ibangelwa yintoni le nto? Zeziphi izinto eziphambili ezichaphazela umgangatho wokumakisha umatshini we-laser?
1. Indawo ekugxilwe kuyo kumatshini wokumakisha we-laser
Indawo ekugxilwe kuyo kumatshini wokumakisha we-laser kukuchaphazela umgangatho wokumakisha. I-Laser kuphela kwindawo ekugxilwe kuyo ukufezekisa amandla kunye nefuthe, jonga indawo yokujonga ukuba ichanekile na, kukho impembelelo enkulu kumgangatho wokuqhubekeka, ichaphazela i-laser nokuba yeyiphi na indima echanekileyo kwindawo yokusebenza, ukufezekisa isiphumo sokusebenza. Ukulungelelanisa ukuphakama kwelensi ejikelezayo ngexesha lomsebenzi we-laser yenza ukuba i-laser ifikelele kwimo yayo yomeleleyo. (Isimo esomeleleyo sibonakaliswe yi-laser ekhupha ukukhanya okumnyama okuluhlaza okwesibhakabhaka, sikhatshwa sisandi esinjengesandi esikhulu)
2. Ukusebenza kwe-laser beam egxile kwi-laser beam egxile ekusebenzeni iya kuchaphazela ngokuthe ngqo umgangatho wokumakisha, ukugxila kwelitha ye-laser kuncinci kakhulu, ke amandla ayo agxile kakhulu. Ngaphandle kokusebenza okuhle kugxile, awunakufumana indawo efanelekileyo ye-laser, awunakho ukusebenzisa uxinano oluphezulu lwamandla e-laser, kwaye awunakho ukufikelela kumatshini wokumakisha we-laser. Kwimeko efanelekileyo yokugxila, isinqe somthi sihlala siphakathi kwesipili sokubona kunye nokujolise kuko.
3. Isantya sokuhamba kwelam laser
Isantya sokuhamba kwentsika ye-laser nayo yinto ebalulekileyo. I-Laser kunye nenkqubo yokunxibelelana kwezinto, isantya sombane we-laser siya kuchaphazela ifuthe le-laser kunye nokuhlangana kwezinto.
4. Umatshini wokumakisha we-Laser wokupholisa
Umatshini wokumakisha umatshini wokumakisha we-laser akufuneki ukungahoywa. Inkqubo yokupholisa ngumatshini opheleleyo we-laser unokuzinza kwaye uzinze ukumakisha, ubushushu abuchaphazeli ukuphuncuka kwe-laser kuphela, buya kuchaphazela nenkqubo yesekethe, umatshini wokumakisha we-fiber laser ngesixhobo esipholileyo somoya, ukunciphisa iqondo lobushushu langaphakathi lomzimba, kunye ukunciphisa ukungaphumeleli komatshini, ukuphucula ukuzinza kwezixhobo, kwaye unomthamo omncinci wokutshatyalaliswa kobushushu ngokukhawuleza.
5. Izixhobo zokumakisha i-laser
Ngapha koko, umatshini wokumakisha ofanayo we-laser, ngenxa yokumakisha izinto ezahlukeneyo, imigca yayo emihle nayo yahlukile, ukuba amandla e-laser asetyenzisiweyo ahlukile, imigca yokumakisha isiphumo esihle nayo iya kwahluka.